The Case for Anti‐Violence Against Women Laws – Burmese Women's Union
The Case for Anti‐Violence Against Women Laws
January 8, 2013 /in Other Documents /by BWUnion
Gender equality recognizes that while women and men are physically different, they are entitled to the same opportunities for self realization and the same human dignity. Enhancing women’s security, establishing institutional practices and laws that do not reinforce power imbalances, and providing appropriate mechanisms for redress ‐‐ are essential elements to ensure equality. Whilst laws and policies may state formally that men and women are equal, they must also take into account the prevailing conditions that prevent women from actually experiencing equality.
1 file(s) 2.6 MB
မြန်မာနိုင်ငံ ဉပဒေများနှင့် စီဒေါသဘောတူညီချက်
1 file(s) 4.2 MB
https://burmesewomensunion.org/wp-content/uploads/2021/04/oth_doc5.jpg 493 662 BWUnion http://burmesewomensunion.org/wp-content/uploads/2021/03/logo-tit-300x68-1.png BWUnion2013-01-08 12:33:062021-04-09 10:50:47The Case for Anti‐Violence Against Women Laws
“Let Us Feel About Peace” September 26, 2021
“It is very difficult to be as the IDPs. I was separated from my family. People are facing so many difficulties in different places. Although there isaday of Peace but it is no sense to me, we are under the hardship life while we are struggling to survive and running”.
ငြိမ်းချမ်းရေး ၁၀နှစ်တာခရီးနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်နိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍအပေါ် အင်တာဗျူး September 25, 2021
“ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာ အမျိုးသမီးတွေ နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာ တာဝန်တွေမထမ်းဆောင်ရဘူးလို့ ဘယ် သူမှမပြောနိုင်ဘူး။ တောင်လည်း ချောင်းဖြစ်တတ်တယ်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကလည်း တောင်ဖြစ်လာတတ်တာပဲလေ။ အဓိက က ဇွဲမလျော့ဘဲနဲ့ကြိုးစားကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုဒီနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကို တော်တော် ကို လက်ခံလာတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေပါပြီ။” ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း (ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ - UPDJC အဖွဲ့ဝင်)
“နွေဦးတော်လှန်ရေးခရီးစဉ်အတွင်းက တော်လှန်သူအမျိုးသမီးများရဲ့ မှတ်တမ်း ” September 25, 2021
၂၀၂၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှစတင်ခဲ့သောနွေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုသည် ယခုအချိန်ထိ ကာလအားဖြင့် ၈ လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်သော်လည်း၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ တက်ကြွစွာဦးဆောင်ပါဝင်မှုများမှာ ယနေ့ထိ အရှိန်မလျှော့သွားသေးဘဲ ဆက်လက်အားကောင်းနေသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ တရားမျှတရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတိုက်ပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့သော အလွှာအသီးသီးမှ အမျိုးသမီးများ၊ နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်ပေးဆပ်ခဲ့ကြသော အမျိုးသမီးများသည် သမိုင်းသစ်ကိုရေးဆွဲကြရန် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပြီး၊ ဤပေးဆပ်မှုများက မြန်မာနိုင်ငံမှအမျိုးသမီးများအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ မှတ်တမ်းအဖြစ်ကျန်ခဲ့မည်ဖြစ်ပါသည်။
“သားသမီးအတွက် သောကပွေကြရသည့် မိခင်များ” September 24, 2021
"ယောကျာ်းလေးတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာ၊ သူပုန်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးတာတွေက အရင်ကတည်းကကြုံရတာ၊ အခုနိုင်ငံရေး အခြေအနေ ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာပိုပြီးမှကြောက်ကြတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ အဲ့ဒီလို ပြန်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ကြောက်ရတယ်"
ဘာသာရေးမှ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်အမြင်များ September 23, 2021
“ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်သည်အထိ အတူတူူလက်တွဲပြီး ကြိုးစားကြမယ်။ ကြိုးစားရင် မ အောင်မြင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တန်ဖိုးရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဟာ အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ ဒုက္ခတွေတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါကို သတ္တိရှိရှိ ကျော်ဖြတ်ရမယ်။ ဒါမှပဲ ပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အမြန်ဆုံးရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။ အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လက်တွဲညီညီနဲ့ ကျိုးစားပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှပဲ အမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရရှိမှာပါ။ အားလုံးပါဝင်ကြပါ။ အသက်ဆုံးရှုံးရတာ တွေ၊ အခက်အခဲတွေ ၊ စိတ်မကောင်းစရာတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်လည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ် မကျဘဲ ၊ ဇွဲမလျော့ဘဲ လက်တွဲပြီး ကြိုးစားရအောင်ပါလို့ အားပေးချင်ပါတယ်။” စစ်စတာ အန်းရိုဇားနူးတောင် (ခရစ်ယာန်)
Developing Anti-Violence Against Women Laws Pushed to the Brink (Conflict and human trafficking on the Kachin-China bor...